Nhoroondo ye #Hashtags | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 8, 2013 China, Gunyana 4, 2014 Douglas Karr
Kana iwe uri mutsva kuma hashtag, tarisa izvi Hashtag Nhungamiro. Vamwe vanhu vachiri kuzvibata pakushandisa nekushandisa ma hashtag sezvo ichiita senge akagadzirwa uye zvishoma zvisina kujairika. Ndiri kunyatso kuziva kuti nei mapuratifomu asingavanze chiratidzo uye nekungowedzera iyo hyperlink kuitira kuti zvinyorwa zvive nyore kuverenga Nenzira imwecheteyo iwe paunonyora @ kana + paFacebook kana Google +… chikuva chinovanza chiratidzo asi chinobatanidza zvinobudirira kuaccount yauri kuratidza.
Hashtags hadzisi dzekungoteedzera nekutapa, inzira inoshamisa yekutsvagisa pamusoro wenyaya wakapihwawo - kana kuwana rwizi rwemashoko pane imwe nhaurwa. Isu takanyora kunze kweiyo akanakisa hashtag ekushandisa ekutsvagisa yako iwe kana iwe uchida kutora kudzika kwakadzika. Ndeapi ma hashtag ezve zvigadzirwa zvako, masevhisi, uye indasitiri? Ndeupi mugove wako wezwi mukati meaya hurukuro? Pane here hurukuro dzinoitika idzo dhipatimendi rako rekutengesa uye rekushambadzira rinofanira kunge riri kusvetukira mukati?
Uye haina kumira ipapo. Mahashtag akabatanidza hupenyu hwezuva rega rega vanhu, mazuva ese. Kubva pa Instagram pikicha yemudzidzi kuenda kuCMO ma tweets, kushandiswa kwema hashtag kwakakurumidza kuita mukurumbira. Mune ino infographic, Offerpop yakanyora dzimwe nguva dzakakosha dzehupenyu hwe hashtag kuti uwane pfungwa iri nani yekuti chiratidzo ichi chakajairika chikava chiratidzo chepasi rose.
Tags: chris Messinachrismessinayekutanga hashtaghashtagnhoroondo yema hashtaginfographicofferpopTwitter